सुरक्षा परिषदलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक, के विषयमा भयो छलफल ? - Everest Dainik - News from Nepal
सुरक्षा परिषदलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक, के विषयमा भयो छलफल ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बिहान ९ बजेदेखि बसेको बैठक केहीबेर अघि मात्रै सकिएको हो ।
बैठकमा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई लगाईएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न हुने नहुने, चुनाबी सुरक्षालगायतमा छलफल भएको बताइएको छ ।
अहिलेको जटिल राजनीतिक अवस्थामा बसेकोसुरक्षा परिषद् बैठकलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । खासगरी राष्ट्रिय विपत् र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा भएका वेला सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय लिन परिषद्को बैठक बस्ने गरेको छ । तर, रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भने आज बसेको बैठकलाई नियमित भनेको छ ।
सुरक्षा परिषद्को बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेकाे छ । उक्त बैठकमा विप्लव समूहबारे छलफल भएको छ ।
प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काउनेबारे छलफल भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले जानकारी दिए । उनले एक–दुई दिनभित्रै वार्ता आह्वान हुने र त्यसका लागि सरकारले वातावरण पनि बनाउने बताए ।
ट्याग्स: सुरक्षा परिषद्